Ihowuliseyili lehoseyile lipsticks ulwelo matte lipstick yabucala ileyibheli siko vegan lipstick yendalo yomvelisi mveliso kunye nabathengisi | Ubuhle beIris
Ihowuliseyili into yokuqaba into yokuqaba into yokuthambisa imilebe yokuthambisa into yokufakelwa kwilaphu eyimfihlo
I-lipstick yolwelo lwe-matte inombala kakhulu kwaye iveza umphumo we-matte velvet matte. Kwangelo xesha, i-matte ye-lipstick yolwelo iqulethe izithako zokuthambisa ukuzisa ukukhanya kunye nokukhanya oku-silky ukwenza imilebe yakho ikhanye ngakumbi kwaye ibe nomtsalane.
I-Lipstick sisithambiso esibalulekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla, esinokuqaqambisa ulusu lwakho. Le lipstick yematte iyafumaneka ngemibala emininzi, nganye kuzo ifanelekile kwiithoni zolusu ezahlukeneyo kunye nokwenza izinto, ungazisebenzisa ngokulula. Khetha enye ngoku kwaye wenze ubuhle bakho.
Egqithileyo OEM ubuso isiseko makeup ulwelo Ihowuliseyili ileyibheli yabucala isiseko izithambiso
Okulandelayo: Sula imilebe isilungiseleli seglosi yabucala lehoseyile ecacileyo lipgloss isilungiseleli seglosi vegan ecacileyo lipgloss umthengisi
Isiko lomlomo wendalo
ileyibhile yelatte yabucala yolwelo
Matte ulwelo yokuqaba yabucala ukwenza o yakho ...